Izikolo zeZonyango ze-24 ezilula ukungena e-UK, US, Canada, Australia, nakwabanye 2022
Fumana ulwazi ngezona zikolo zonyango zilula ukungena eUnited Kingdom, eunited States, Canada, Ostreliya, kunye nezinye ihabhu zemfundo ephezulu.
Amazwe, i-UK, i-US, iCanada ne-Australia zamkelwe kwilizwe liphela njengezona ndawo ziphambili zemfundo, abafundi abasuka kwamanye amazwe bafuna ukulandela isidanga kwelinye lamaziko aphakamileyo kwelinye lala mazwe emfundo aphezulu. Kungenxa yokuba la mazwe aneyona yunivesithi zibalaseleyo kwihlabathi kwaye anikezela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kubo bobabini abafundi basekhaya nakwamanye amazwe.
Ukuba ungumfundi wamazwe aphesheya ufumana isidanga kwelinye lamaziko aphakamileyo kulo naliphi na kula mazwe isidanga sakho okanye i-CV yakho iya kwamkelwa phambi kwabanye. Ezi izidanga zibambe iwonga lokuba ziyaqatshelwa yi-HR evela kwihlabathi liphela, ngeli nqanaba kwiphothifoliyo yakho ubethe ukhuphiswano olukhulu kwindawo ephambili.
Ngoku makhe sithethe ngezikolo zonyango e-UK, US, Canada, Australia, nakwabanye…
Xa usiva "isikolo sezonyango" into elandelayo ethi qatha engqondweni kukuba kunzima kangakanani ukungena kuso kwaye le ngqondo ngokubanzi, ngathi, wonke umfundi kuwo onke amazwe anayo. Ewe, ewe, izikolo zonyango kunzima kakhulu ukungena, ndiyathetha, uyasebenza kwaye uphethe ubomi babantu, kwaye zezona zibalaseleyo zezona zikhethiweyo.
Ukwenza oku kwenzeke, ukukhetha ezona zintle, umgangatho kufuneka uphakanyiswe phezulu kakhulu kwaye lo "mgangatho uphakamileyo" uthetha ukuba abafundi abaninzi kufuneka baphume kwaye kuphela abagqwesileyo, abaqhele ukuba bancinci, Ukupasa, ngena kwisikolo sezonyango ukuze ube ngabasebenzi bezonyango abaqeqeshiweyo.
Ngoku, khawufane ucinge ngokufuna ukufunda amayeza, ikhosi enomgangatho ophezulu kwaye kunzima ukungena kuyo, kwindawo ephezulu yemfundo enje nge-US, UK, Canada, okanye i-Australia-leyo iyakuba yingcinga enzima- iya kuphela Nzima.
Ewe, kunzima ukungena kwisikolo sezonyango kwelinye lala mazwe kodwa nalapho kukho ezinye zezonyango kula mazwe ekulula ukungena kuzo, kwaye eli nqaku lipapashiwe ngenxa yeso sizathu sodwa. Ukuhlaziya nokukukhanyisela kwezona zikolo zilula kwezamazwe kwaye zidweliswe ngokwelizwe kwaye zixoxwe ngokuququzelela ukwamkelwa ngokulula kuso nasiphi na isikolo sezonyango.
Kwakhona Qaphela: Kutheni ubude be-eriyali yerediyo ye-VHF ibalulekile.
Ndithembe, ezi zikolo zonyango zilula “azilula” kodwa phakathi kwazo zonke ezinye izikolo zonyango, unamathuba aphezulu okungena kwezi zikolo. Ezona zikolo zilula kwezonyango ziyakhuphisana kwaye eyona nto yenza ukuba "kube lula" ukungena kuzo kukuba inenqanaba lokwamkelwa eliphezulu xa kuthelekiswa nezinye izikolo zonyango.
Izinga lokwamkelwa kwesiqhelo kwizikolo zonyango phakathi kwe-5% ukuya kwi-9.5% kodwa ezi zikolo zonyango zilula zichazwe kweli nqaku phakathi kwe-18% ukuya kwi-38% kwaye oku akuchaphazeli umgangatho wokufundisa wesikolo, bobabini bavelisa oogqirha abaziingcali.
Ngaphambi kokuba ekugqibeleni sizibone ezi zikolo, masikhawuleze siphathe imibuzo ebuzwa rhoqo
Kutheni usiya kwisikolo sezonyango?
Zithini iimfuno zesikolo sezonyango?
Yeyiphi i-GPA elungileyo kwisikolo se-med?
Izikolo zeZonyango ezilula kakhulu ukungena e-UK
IYunivesithi yaseKumkanikazi yeYunivesithi yaseBelfast yeZonyango, iDentistry kunye neSayensi yezoBomi
IYunivesithi yaseSt. Andrews School of Medicine
Izikolo zezoNyango ngokulula ukungena eCanada
IYunivesithi yaseSaskatchewan College of Medicine
IYunivesithi yaseBritish Columbia yeFakhalthi yoNyango
IYunivesithi yeSikhumbuzo saseNewfoundland iCandelo leMicrothelo
Izikolo zezoNyango ngokulula ngokulula ukungena eCarlifonia
Isikolo samayeza i-UC Davis
Isikolo samayeza i-UCI
IKeck School of Medicine, iYunivesithi yase-Southern California
Izikolo zeZonyango ezilula kakhulu ukungena eFlorida
IYunivesithi yaseCentral Florida College of Medicine
UCharles E. Schmidt kwiKholeji yoNyango
Ikholeji yaseFlorida State University of Medicine
Izikolo zeZonyango ezilula ngokungena e-Australia
Isikolo seAdelaide Medical
Ikholeji yaseCharles Darwin yezeMpilo kunye nezeNzululwazi yaBantu
Izikolo zonyango zeCaribbean ngokulula ukuba ungene kuzo
IYunivesithi yaseCaribbean Medical (CMU)
Isikolo seYunivesithi yaseRoss seMedical
Isikolo seYunivesithi yaseSt. George's Medicine (GSU)
Izikolo zoNyango zaseMelika ezilula ngokungenelela
IYunivesithi yaseNyakatho Dakota: iSikolo sezoNyango kunye nezeNzululwazi yezeMpilo (UND)
IYunivesithi yaseMassachusetts Medical School (UMMS)
IYunivesithi yaseMissouri -Kansas City School of Medicine (UMKC)
Izikolo zonyango zeOsteopathic ezilula ukuba ungene kuzo
IYunivesithi yaseMississippi School of Medicine (UMSOM)
Ikholeji yaseYunivesithi ekuMbindi Wonyango
IYunivesithi yasePuerto Rico School of Medicine
Izikolo zeZonyango ezilula kakhulu ukungena eMhlabeni
Kukho izizathu ezingapheliyo, ngaphandle kwezizathu zobuqu, kutheni abantu beya kwisikolo sezonyango kodwa ezinye zezizathu eziphambili zezi:
Ukufumana kunye nokuzixhobisa ngezakhono ezizodwa zonyango ukuphucula ubomi kunye nempilo yabanye abantu.
Yiba yinxalenye yeqela lokhathalelo lwempilo
Imisebenzi ekhethekileyo yonyango kunye neyonyango engeyiyo yekliniki
Ukuphucula iindlela esele zikhona zonyango kunye nokwenza ezintsha
Ukuba ngumfundi wobomi bonke kwinqanaba lomsebenzi ophuhlisa ingqondo
Izidingo zokungena kwizifundo zezonyango ziyahluka ukusuka kwisikolo ukuya kwisikolo, inkqubo, kunye nesidanga kodwa nazi iimfuno ngokubanzi:
Idiploma yamabanga aphakamileyo
Isidanga sokuqala kwicandelo lezenzululwazi
Amanqaku aphezulu e-TOEFL kunye neMCAT
Ubuncinci besiqu se-GPA ye-3.0
Ukubandakanyeka kwimisebenzi yangaphandle
Izifundo zonyango ziphakathi koqeqesho olufuna i-GPA ephezulu kakhulu kwaye i-GPA elungileyo yesikolo med mayingabi ngaphantsi kwe-3.5 nangona ezinye izikolo zifuna i-3.5 GPA esezantsi ikhuseleke kakhulu.
Ke, ngaphandle kokuqhubela phambili, masiye kudidi lokuqala lolona zikolo lulula kwezonyango ukuba singene e-UK, silandelwe yi-US, Canada, Australia kunye nokunye.
Isikolo sezoNyango, iDentistry kunye neBiomedical Sciences sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseQueen yaseBelfast kwaye samkelwe phakathi kwezona zikolo zonyango zilula ukungena e-UK, ngenqanaba lokwamkelwa kwe-38.3%. Eli linqanaba lokwamkelwa okuphezulu kakhulu kwisikolo sezonyango kodwa emva koko, sithetha ngezona zikolo zonyango zilula, akunjalo?
Inqanaba lokwamkelwa okuphezulu kweBelfast akufuneki likwenze ukuba ucinge ukuba sisikolo sezonyango esikumgangatho ophantsi, yindawo enomdla yokufunda amayeza nokuba ngaba izifundo zesidanga sokuqala okanye zesidanga sokuqala. Abafundi bafumana amava okunyanga kwizibhedlele ezahlukeneyo, iindlela eziqhelekileyo, kunye noseto lokhathalelo lwempilo.
Icala elisezantsi kwesi sikolo ziimfuno zalo zokungena-onokuzifumana Apha - kunzima ukudibana nazo kunezinye izikolo zonyango. Ngaphandle kwalonto, abafundi baxhotyiswa ngezakhono ezitsha zonyango kwaye bafumane amava okufunda kwiindawo zoncedo ezenziwe zifumaneke esikolweni.
Ikhonkco lewebhusayithi yesikolo
Isikolo sezonyango i-Hull York sisikolo sezonyango esisekwe ngokudityaniswa kweiyunivesithi ezimbini, iHull kunye neYork ziiyunivesithi ezimbini ezahlukeneyo e-UK kwaye badibene ukudala isikolo esinye sezonyango- iSikolo sezoNyango iHull York.
Esinye sezona zikolo zilula kwezonyango zase-UK zokungena ngenqanaba lokwamkelwa kwe-28.9% - intle kakhulu nayo- kwaye sisikolo sanamhlanje esonwabisayo esinikezela ngemfundo yezonyango eyoyikisayo nengqongqo kunye nophando kwizidanga zokuqala kunye nezidanga zokuqala.
Abafundi bahlala befaka apha kuba bakonwabela ukuba yinxalenye yeeyunivesithi ezimbini ezahlukeneyo ngaxeshanye bebenza ukuba baphonononge iindlela zokufundisa kunye nokufunda (ezisebenzayo) ngaxeshanye kwaye babe ziingcali ezifanelekileyo kwindawo yezonyango.
Eyasungulwa ngo-1413 kwaye ngaphambili yaziwa ngokuba yi-Bute Medical School, iYunivesithi yaseSt.Andrews yeSikolo sezoNyango sisikolo sezonyango esidala kunazo zonke eScotland kwaye sabalwa phakathi kwezona zikolo zonyango ezilula kakhulu zase-UK ukungena ngezinga lokumkela i-25.1%. Isikolo sezonyango sinabemi abamalunga ne-470 kwizifundo zesidanga sokuqala nakwizidanga zokuqala.
Isikolo sezonyango sifundisa abafundi bezonyango kwiminyaka emithathu yokuqala yoqeqesho lwabo, kunye nabafundi abagqibezela olu qeqesho kwizikolo ezahlukeneyo zonyango e-UK. Ukuba unomdla wokufaka isicelo sesi sikolo, fumana iimfuno ezipheleleyo zokungena Apha kunye nezinye iinkcukacha, cofa kwikhonkco lewebhu lesikolo elingezantsi.
Nazi i-3 zezona zikolo zonyango zilula zokungena e-UK, jonga iimfuno zabo zokungena ukuze wazi ukuba ungadibana na ngaphambi kokufaka isicelo.
Ukuya kwicandelo elilandelayo…
IYunivesithi yaseSaskatchewan Medical School
Ngomgangatho wokwamkelwa we-14.1%, iYunivesithi yaseSaskatchewan College of Medicine sesinye sezona zikolo zilula eCanada zokungena kunye nesikolo sezonyango saseyunivesithi. Ikholeji ibonelela ngeentlobo zeenkqubo zonyango kwizidanga zokuqala nakwinqanaba lokufunda.
Ezinye zeekhono ziyi-biochemistry, i-pathology, i-physiology, utyando, amayeza osapho, i-obstetrics & gynecology, i-ophthalmology, njl.njl. iimfuno.
Ukuba unomdla wokuya kwiKholeji yaseSaskatchewan yezoNyango kufuneka uhlangabezane neemfuno zokungena kwaye ziyahluka ngokwamandla, landela nje ikhonkco elingezantsi ukuze ubone iimfuno zenkqubo ethile.
I-UBC yeFakhalthi yoNyango sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseBritish Columbia ngenqanaba lokwamkelwa kwe-12.4% isenza esinye sezona zikolo zilula eCanada ukufumana ukungena. Icala elisezantsi yimfuno yokungena kwayo ephezulu xa kuthelekiswa nezinye izikolo ezikolu luhlu. Ifuna abafake izicelo ukuba babe ne-GPA iyonke ye-88.17% yabafundi basekhaya kunye ne-91.44% yabafundi bamanye amazwe.
Yiyo kuphela isikolo sezonyango kwiphondo laseBritish Columbia kwaye inenkqubo yezemfundo yezobugqirha enkulu kunazo zonke eCanada, yesihlanu ngobukhulu eCanada, ibekwe njenge-2nd Eyona nkqubo yezonyango ilungileyo eCanada, kwaye ikwindawo ye27th emhlabeni.
Inyani yokuba sesinye sezona zikolo zilula eCanada zokungenisa ayenzi iziko elikwinqanaba eliphantsi, iphakathi kwezona zibalaseleyo kuzwelonke nakwamanye amazwe. Abafundi apha baqeqeshelwe ukuba babe sisizukulwana esilandelayo soogqirha kunye noochwephesha kwezononophelo lwempilo, benza ukufumanisa okumangalisayo, kunye nokunceda ekuphuculeni impilo engcono kwilizwe liphela nakwamanye amazwe.
I-Faculty of Medicine kwiYunivesithi yeSikhumbuzo yaseNewfoundland yasekwa kwi-1967, sisiseko sophando kwezempilo kwiphondo kwaye yenye yezona zikolo zilula zonyango ukungena eCanada ngenqanaba lokwamkelwa kwe-11.3%. I-faculty ibonelela ngesidanga sokuqala, isidanga sokuqala, kunye neenkqubo zokuthweswa isidanga ezikhokelela kwi-masters, ugqirha okanye izidanga ze-MD-PhD.
Kukwakhona neediploma kwiMpilo yoLuntu, i-Clinical Epidemiology, kunye nezifundo zasemva kwesekondari. I-Faculty of Medicine kwiYunivesithi yeSikhumbuzo yaseNewfoundland igqwesa ekufundiseni ngeklinikhi kwaye inolwazi lobuchwephesha kwiindawo ezahlukeneyo zobuchule bezonyango kunye nophando ngezempilo. Iindlela zokufundisa zahlukile eziyilelwe ukubonelela ngemfundo yezonyango ebanzi nehlangeneyo.
Ezi zezona zikolo ziphambili ze-3 ezilula zokungena eCanada, kuya kufuneka uqaphele ukuba amaxabiso okwamkelwa kwizikolo zonyango zaseCanada asezantsi kakhulu kunaseUKs 'oku kuya kukunceda ekukhetheni ilizwe ukuba liye kufunda amayeza. Ikwathetha ukuba izikolo zonyango eCanada zinokhuphiswano ngakumbi kunolo lwase-United Kingdom.
I-UC Davis School of Medicine sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseCalifornia, esasekwa ngonyaka we-1966 nenabafundi abangama-500. Isisenokuba sesinye sezona zikolo zilula kwezonyango ukuba sifike eCalifornia kodwa sikhuphisana kakhulu.
I-UC Davis School of Medicine sesinye sezona zikolo zihamba phambili kwezonyango eUnited States naseCalifornia, izinikele ekuboneleleni abafundi ngamava okufundisa ngezonyango. Enye yeemfuno zemfundo yi-GPA ephakathi ye-3.0 kunye ne-MCAT ye-509.
Ngezinye iimfuno kunye neenkqubo zesicelo, jonga kwiwebhusayithi ngokunqakraza kwikhonkco elinikezwe apha ngezantsi.
Le yiDyunivesithi yaseCalifornia, Irvine School of Medicine, esekwe kwi-1896 kwaye ibekwe e-Irvine, California, USA. Isikolo sinekliniki ye-19 kunye ne-6 yamasebe esayensi esisiseko kunye neenkqubo zokubonelela ngedigri ezahlukeneyo kubandakanya ne-Ph.D. kunye neenkqubo zeMS.
Esi sikolo sonyango siseUnited States kwaye sinokukhuphisana kakhulu, kuncinci kuphela kunezinye ngeli xesha, ukuba unayo into efunekayo ukufundisisa amayeza apha njenge-GPA ephakathi ye-3.78 kunye ne-MCAT ye-514.5, ngoko ungaya ukufaka isicelo. Bona ezinye iimfuno zokungena kwikhonkco elingezantsi.
Nasi esinye sezona zikolo zonyango zilula ukungena eUnited States, California ngokuchanekileyo eyasekwa kwi-1885 kwaye yamkelwa njengesikolo sezonyango esidala sesibini eCarlifonia. Inabafundi ngokubanzi be-1,262 ababhalise kwi-bachelor's, master's, nakwiinkqubo zobugqirha kunye neenkqubo zokudibana.
Isikolo sezonyango sijolise ekuqeqesheni isizukulwana esilandelayo seenkokheli ngononophelo lwezigulana ezikumgangatho wehlabathi, ukukhula kwamakhondo kunye nophando. Imfuno yokufunda ifaka i-GPA ephakathi ye-3.73 kunye ne-MCAT ye-516, ezinye iimfuno zokungena ziyafumaneka kwiwebhusayithi yesikolo engezantsi.
Eyasungulwa ngo-2006 kwaye ihlala e-Orlando, eFlorida, eUnited States, kwiYunivesithi yaseCentral Florida, kwiKholeji yezoNyango phakathi kwezona zikolo zilula ukungena eFlorida. Inani labafundi lifikelela kwisifundo esimalunga ne-3,800 yabafundi ababhalise kumacandelo ohlukeneyo oqeqesho kwizifundo zesidanga sokuqala kunye nakwinqanaba lokuthweswa izidanga kubandakanya iMD kunye nePh.D. izidanga.
Inkqubo yezonyango i-UCF ibonakalisa ubuchule, izixhobo zobuchwephesha bokufunda, kunye nomoya wokuphayona wokufundisa oogqirha abancinci kunye nososayensi ngendlela entsha nengcono ye21st ngenkulungwane.
Izidingo zemfundo zibandakanya umndilili we-MCAT ye-512 kunye ne-avareji ye-GPA ye-3.81, inokuba sesinye sezona zikolo zilula zonyango ukungena kodwa iimfuno zemfundo ziphezulu xa kuthelekiswa nezinye ezikolu luhlu olungelolona luphantsi kwabo bafuna ukuba ngabafundi. .
Esi sisikolo sezonyango saseFlorida Atlantic University esisekwe kwi-2011 kwaye yenye yezona zikolo zonyango zilula ukungena eFlorida, inika izidanga kwi-MD kunye ne-Ph.D kuphela. iinkqubo. Inqanaba leendaba zase-US zibekwa kwinqanaba lesikolo sezonyango kwi-93-120 ephezulu yezikolo zonyango e-US.
Ikholeji ijonge ukuqhubela phambili impilo kunye nentlalo-ntle ngokuqeqesha izizukulwana ezizayo zeeklinikhi zoluntu kunye nososayensi kunye nokuguqula ukufumanisa kukhathalelo olujolise kwizigulana. Ezinye zeemfuno zokungena kwizifundo zibandakanya umndilili we-GPA kunye ne-MCAT ye-3.74 kunye ne-511 ngokwahlukeneyo. Bona ezinye iimfuno kwiwebhusayithi yesikolo engezantsi.
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseFlorida State kwaye yasekwa ngonyaka ka-2000, inika isidanga se-MD koogqirha, i-Ph.D. isidanga, kunye nenkqubo yoMncedisi kaGqirha. Ikholeji inabafundi abangama-532 ababhalise kumasebe ayo amahlanu: iiNzululwazi ngezeNzululwazi kunye noNyango lwezeNtlalo, iiSayensi zeBiomedical, iiSayensi zeKlinikhi, amayeza oSapho kunye neMpilo yasemaPhandleni, kunye neGeriatrics.
Abafakizicelo bayacelwa ukuba banelise iimfuno zokungena kwizifundo zomndilili we-3.7 GPA kunye ne-% 11 yamanqaku e-MCAT, ezinye iimfuno ziyafumaneka kwiwebhusayithi landela ikhonkco elingezantsi ukuze ubone okungakumbi.
Izikolo zonyango kumacandelo aseCalifornia naseFlorida zezinye zezona zikolo zonyango zilula ukungena eUnited States ngokukodwa kwezi ndawo. Nangona iipesenti zabo zokwamkelwa zinganikwanga ngokungafaniyo nezinye kwaye kungenxa yokuba zazingafumaneki ngexesha lokudityaniswa kwala manqaku.
Nangona kunjalo, ungasoloko uhamba ngokweemfuno zokungena kwaye ukuba uyazanelisa zonke ungaqala isicelo, esenziwa ikakhulu kwi-Intanethi, kukho amathuba aphezulu okuya kwezi zikolo ukuba uyahlangabezana nemilinganiselo yokufunda ekufuneka yamkelwe.
Esi sisikolo sezonyango kwiDyunivesithi yaseAdelaide kwaye sesona sikolo sikhulu eyunivesithi, ibonelela abafundi bezonyango indawo ekumgangatho ophakamileyo, yokufunda nokusebenzisana kwabafundi abafundela amayeza okuguqulela kunye nophando. Abafundi bamkelekile ukuba bakhethe kwaye bafunde kuluhlu lweedigri zokuqala kunye nezamabanga aphezulu kwizidanga kunye notyando.
Ngenkqubo oyikhethileyo, uya kubonelelwa ngemeko esekwe kwimeko yokufunda, amava olinganiso kunye nobomi bokwenyani, kunye namathuba okufunda aphakathi. Izidingo zokungena ziyahluka ngokwenkqubo, bona ikhonkco lewebhusayithi elingezantsi ukuze ufunde ngazo.
Ikholeji yezeMpilo kunye nezeNzululwazi yaBantu sisikolo sezonyango se-CDU kwaye sinika uluhlu lweendlela zonyango ezinje ngeeNzululwazi zeKlinikhi, ikhemesti, Psychology, iSayensi yezeMpilo, iPhysotherapy, amayeza, njl.njl.
Kukho iimfuno ezahlukeneyo zokungena kubafaki-zicelo kufuneka banelise ukuze bamkelwe kwesi sikolo sonyango, kwaye ukuba uyadibana nabo akukho mathandabuzo okuba uya kwamkelwa, yiyo yonke loo nto, sesinye sezona zikolo zonyango zilula ukungena e-Australia.
Isikolo seMonash sezoNyango sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseMonash kwaye esinye sezona zikolo zilula zonyango ukungena eOstreliya. Esi sikolo sonyango sinikezela ngemfundo ephezulu ngokugxila kukhuseleko lwezigulana kunye nokuziqhelanisa nobuchule, ukulungiselela abafundi ukuba batshintshe ubomi kwiindawo ezahlukeneyo nakwihlabathi liphela.
Kukho uluhlu olubanzi lweenkqubo zesidanga se-bachelor's, master's, kunye nenqanaba lobugqirha lokufunda, kwaye iimfuno zabo ziyahluka, unokufumana ezi mfuno ngokulandela ikhonkco elingezantsi.
Ezi zezona zikolo ziphezulu kwezona zonyango zilula ukungena e-Australia, ukwenza uphando oluthe kratya usebenzisa amakhonkco anikiweyo.
Masiwele kwicandelo elilandelayo…
KwiYunivesithi yaseCaribbean Medical
Isikolo seYunivesithi yaseGeorge
IYunivesithi yaseCaribbean Medical ireyithi yokupasa ye-9/10, okuthetha ukuba abafundi abali-10 bazalisekisa iimfuno zokungena kuyo nayiphi na inkqubo yonyango yesikolo, kuya kuthathwa isithoba (9). Ukuza kuthi ga ngoku kolu luhlu lwezona zikolo zezonyango kulula ukungena kuzo, kubonakala ngathi yeyona inesisa.
I-MCAT ayifuneki, yi-GPA ye-3.5 okanye ngaphezulu kunye nezinye iimfuno zokungena onokuzifumana kwikhonkco elinikezwe apha ngezantsi. Inabemi abangama-684 kwaye ibonelela ngeefomathi zokufunda kwi-intanethi nakwi-campus.
Eyasungulwa ngo-1978 kwaye yazinikezelwa kwisayensi yokuphilisa, iYunivesithi yaseRoss yezoNyango yenye yezona zikolo zonyango ezilula kwiCaribbean ukungena ngezinga lokumkela lama-42.7%. Izinga lokwamkelwa apha liphezulu ngokwenene kwaye ukuba uyanelisa iimfuno zokungena, uqinisekile unethuba eliphezulu lokuba ngumfundi wezonyango apha.
Isikolo sezonyango sinikezela ngeenkqubo zesidanga sokuqala kunye ne-MD kwezonyango kubafundi abavela kwiCaribbean nakwamanye amazwe. Injongo apha kukufundisa nokuxhobisa inani labafundi abazimiseleyo nabazinikeleyo abazimisele ukwenza ifuthe elingenakuphikwa kuluntu lwabo.
Iimfuno zesidanga sokuqala - onokuzifumana Apha -Iyahluka kuleyo yabafundi abaphumelele- nayo Apha -Ukufunda ngakumbi malunga neyunivesithi ndwendwela ikhonkco elingezantsi.
IYunivesithi yaseSt. George's of Medicine yasekwa ngonyaka we-1976 njengesikolo sabucala sezonyango kunye neyunivesithi yamanye amazwe ebekwe eGrenada, eWest Indies enikezela izidanga kwezokonga, amayeza, impilo yoluntu, isayensi yezempilo, ubugcisa kunye nesayensi, kunye neshishini. Inabemi abangaphezu kwe-6,300 kwaye sesinye sezona zikolo zonyango zilula kwiCaribbean ukungena ngenqanaba lokwamkela i-41%.
Iyunivesithi ibonelela ngeedigri kwi-bachelor kunye ne-MD amanqanaba okufunda kunye neemfuno zabo zokungena kwizifundo ziyahluka, zifumane kwikhonkco elinikezwe apha ngezantsi.
Ezi zikolo zintathu zonyango zidweliswe apha zezona zikolo zibalaseleyo kwezona ziphezulu ze-3 zokungena kwiCaribbean, kwaye bonke bayazamkela abafundi bamanye amazwe, ke unokufuna ukuzijonga ukuba imeko yakho yokufunda ayidibani nezinye izikolo zonyango eziphezulu.
IYunivesithi yaseNyakatho Dakota: iSikolo sezoNyango kunye nezeNzululwazi yezeMpilo
Esi sesinye sezona zikolo ziphezulu kwezonyango e-United States sasekwa e-1905 kwaye siqeqeshe phantse isiqingatha samagqirha asebenza kurhulumente. Inika i-bachelor's, master's, kunye ne-Ph.D. iinkqubo kuluhlu olwahlukeneyo lweenkqubo zonyango.
Akukho sixa sokwamkelwa siqhelekileyo kodwa iipesenti ezimbini kwezintathu zoogqirha baseMelika bafumana isidanga sazo kwi-UND. Oku kwanele ukukunceda uqonde ukuba kulula kangakanani ukungena kwesi sikolo sezonyango, ukupasa nje iimfuno zemfundo kwaye uya kufumana ithuba lokuba ngumfundi wezonyango apha.
Eyaziwa ngokuba yi-UMass okanye i-UMMS, iYunivesithi yaseMassachusetts Medical School sisikolo sikarhulumente esiseWorcester, eMassachusetts esisekwe kwi-1962 naphakathi kwezona zikolo zilula kwezonyango e-US ukungena.
Ihlala ezinye izikolo ezithathu zonyango ngaphakathi kwiSikolo seSidanga seNzululwazi yezoBomi, iSikolo sezoNyango, kunye neSikolo sezoNesi esiPhumeleleyo kunye neshishini lophando lwezinto eziphilayo kunye noluhlu lwamanyathelo enkonzo yoluntu kwilizwe lonke.
Eyasungulwa ngo-1971 kwaye yaqatshelwa e-US njengesinye sezona zikolo zonyango ezilula ukungena, esinye sezikolo ezintathu zonyango ezikufutshane nedolophu yaseKansas. Ikharityhulam yezikolo zonyango ifanelekile, injalo, inikezela ngenkqubo ye-Bachelor / MD ekhawulezileyo edibeneyo esekwe kwikharityhulamu yeminyaka emithandathu.
Kuthetha ukuthini ukuba isikolo seyeza samkela abafundi ngokuthe ngqo ukusuka kwisikolo esiphakamileyo kwaye emva kweminyaka emithandathu baphumelela nge-bachelor's kunye nogqirha we-degree degree (BA / MD). Le nkqubo inokhuphiswano olukhulu kwaye ngaphezulu kwabafundi be-2000 baphumelele kuyo.
Ukuba uyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zokungena kwizifundo nawe unokuba yinxalenye yenkqubo kwaye uphumelele isidanga se-BA / MD esidibeneyo kwiminyaka nje emithandathu. Landela ikhonkco elibonelelweyo ngezantsi ukuze ufunde ngezi mfuno.
Iyeza le-Osteopathic lisebe lezamayeza elijongana kwaye ligxile kukhathalelo lwempilo kodwa oko kubandakanya amayeza amiselweyo, utyando, itekhnoloji yezonyango, uvavanyo lokulimala, kunye nokunye
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseMississippi, esekwe kwi-1903 kwaye ngoku sesinye sezona zikolo zonyango zilula kakhulu ukuba zingene. Injongo ebalulekileyo yesikolo sezonyango kukuqeqesha oogqirha ukuba banikezele ngononophelo lwezempilo, olulinganayo noluntu olulinganayo kwiindawo zabo ezahlukeneyo nakwihlabathi jikelele.
Inqanaba lokwamkelwa kwesi sikolo sonyango yi-37.07% kwaye isicelo sisebenza kuphela kubemi baseMelika okanye kubahlali abasisigxina. I-UMSOM ibonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zesidanga esikhokelela kwezi zinto zilandelayo zonyango: ukuziqhelanisa nosapho, unyango lwabantwana, amayeza abantu abadala, amayeza angaphakathi, kunye nezinye izinto ezizodwa.
Ngenqanaba lokwamkelwa kwe-21.91%, i-Central Michigan University College of Medicine sesinye sezona zikolo zilula zonyango ukufunda amayeza e-osteopathic. Ikholeji ibonelela ngendlela ebanzi yokufunda enokwandisa ikhosi eqhelekileyo kunye noqeqesho olwenziwayo ngokwenza ukulinganisa kwezonyango, ukujikeleza kweklinikhi, kunye noomabhalane basekuhlaleni.
Izidingo zokungena zibandakanya i-GPA ye-3.25 okanye ngaphezulu, iileta ezintlanu zokucebisa, kunye nezinye onokuzifumana usebenzisa ikhonkco elinikezwe apha ngezantsi.
Eyasungulwa ngo-1912 kwaye ithathwa njengesona sikolo esona sihle kakhulu sezonyango kwihlabathi ngenxa yemfuno yokuba wonke umfundi owamkelweyo ukuba aphumelele ngokupheleleyo isiNgesi nesiSpanish, esinye sezona zikolo zonyango ezilula kakhulu ukufunda i-osteopathy.
Inenqanaba lokwamkelwa le-13.65% kwaye ezinye zeemfuno zayo zokwamkelwa zibandakanya umndilili we-GPA ye-3.79. Iinkqubo zesidanga zinikezelwa kumacandelo ezonyango, i-radiology, ubuhlengikazi, ikhemesti, utyando, ugqirha wamehlo, kunye nesigama sezonyango.
Ukuba unomdla wokufunda iyeza le-osteopathic, unokufuna ukuqaphela ezi zikolo zonyango zilusizi zikwezona zikolo ziphezulu zonyango ngamanqanaba aphezulu okwamkelwa kwabafundi abafuna ukufunda amayeza e-osteopathic.
Ezona zikolo zezonyango kulula ukungena kuzo sele zidwelisiwe kwaye zachazwa kweli nqaku, ngenxa yokucaca, kuya kufuneka ndibasindise. Kodwa zizikolo zonyango ezinamazinga aphezulu okwamkelwa.
Ezona zikolo zezonyango zilula emhlabeni ukufumana ukungena zezi:
Isikolo seYunivesithi yaseGeorge's Medicine (GSU)
Ezi zezona zikolo ziphambili zibalaseleyo kwezine kwihlabathi kwaye iinkcukacha zazo sele zinikezelwe kweli nqaku kunye nokunxibelelana kwesicelo sokufunda ngezinye iimfuno ezithile zenkqubo.
Indlela yokufumana ukungena kwi-MBBS eCanada | Isikhokelo esipheleleyo
ezona zikolo zilula ukungena kuzoIzikolo zonyango ezilula kakhulu ukungena e-AustraliaIzikolo zonyango ezilula kakhulu ukungena eCaliforniaIzikolo zonyango ezilula kakhulu ukungena eFloridaIzikolo zonyango ezilula kakhulu ukungena kwihlabathiIzikolo zonyango ezilula kakhulu ukungena e-UKIzikolo zonyango ezilula kakhulu ukungena eMelika
Post Previous:Uluhlu lwe-29 Federal Polytechnics eNigeria eneenkcukacha ezipheleleyo
Okulandelayo Post:Izifundo ezingama-25 eziSimahla eziPrintwayo zeziFundo zeBhayibhile ezinemibuzo kunye neempendulo PDF
Pingback: Izizathu ze-7 zokuba kutheni kufuneka ucinge ngokufunda e-UK 2021